News 18 Nepal || लाइभ सेसनकै दौरान अभिनेत्रीको तस्‍बिरमा हस्तमैथुन गरेपछि..
एजेन्सी । पाकिस्तानी अभिनेत्री हानिया आमिरले सामाजिक सञ्जालमा एउटा भिडियो पोष्ट गरेकी छन् । उनले भिडियोमा भनेकी छन्, ‘महिलाहरुलाई घृणा गर्नेहरु यो संसारमा दुई थरी मान्छेहरु छन् । यहाँ अर्काको सल्लाह सुझावलाई सम्मान गरिँदैन । जहाँ एक महिलालाई तिरस्कार गर्ने पुरुषको तारिफ हुन्छ । तर त्यही काम कुनै महिलाले गरे उनलाई घृणा गरिन्छ । यहाँ आफ्नो प्रियजनसँग माया वा कुरा गर्ने महिला गलत हुन्छिन् । तर महिलाको तस्बिरसामु हस्तमैथुन गर्ने पुरुषको भिडियो भाइरल गराइन्छ ।’
भिडियोमा उनले आफ्नी बहिनीसँग कुरा गर्छिन् र लगातार आँखामा भरिएका आँशु पुछिन् । हानिया तिनै अभिनेत्री हुन्, जो सामाजिक सञ्जालमा सधैं चर्चामा रहने गर्छिन् । उनले गरेका विभिन्न पोष्टका कारण उनी चर्चामा रहने गर्छिन् । तर त्यस्तो के भयो ? जसले उनलाई रुन बाध्य बनाएको छ । किन उनी भावुक भएर यस्तो कुरा गरिरहेकी छन् ?
पछिल्लो शुक्रबार उनी इन्स्‍टाग्राममा लाइभ आएकी थिइन् । उनले त्यहाँ आफ्ना फ्यानहरुसँग कुराकानी गरिरहेकी थिइन् । लाइभ सेसनकै दौरान एक जनाले उनको तस्बिरमा हस्तमैथुन गरे । यो सब यति अविश्वनीय थियो कि हानियाले कल्पना समेत गरेकी थिइनन् । त्यो घटना लगत्तै उनको अनुहारमा बदलाव देखिएको थियो । उनी भावुक बनेकी थिइन् । उनले तुरुन्तै लाइभ सेसन बन्द गरेकी थिइन् ।
तर इन्टरनेटको जमानामा त्यो भिडियो भाइरल बन्न समय लागेन । कसैले सामाजिक सञ्जालमा उनको तस्बिरमा गरिएको हस्तमैथुनको भिडियो भाइरल बनाइदिए । अहिले पनि उक्त भिडियो र हानियालाई लिएर ट्रोलहरु बनाइँदै छ । हुन त उक्त भिडियो फेक हुन सक्ने बताइएको छ ।
यो भिडियो मात्र होइन । हानियाको टाउको दुखाइको विषय बनेको अर्को भिडियो पनि छ । अर्को भिडियोमा उनी निर्देशक वजाहत रउफका छोरा आशिर र नायलसँग गीत गाउँदै अंगालोमा बाँधिएकी छन् । हानियाले निर्देशक वजाहतलाई आफ्नो परिवारको हिस्सा मान्छिन् ।
उक्त भिडियोसँगै उनले भनेकी पनि थिइन्, ‘आफ्नो भाइलाई यसरी सम्हाल्न सकिन्छ, जति बेला उ १०१ डिग्रीको बिरामी हुन्छन् ।’ बढी जसो फ्यानहरुले भने हानिया आमिरलाई यौन उत्पीडन गरेको भन्दै आपत्ति जनाइरहेका छन् भने कतिपयले निर्देशकको छोरासँगको भिडियोलाई लिएर अश्लीलता फैलाएको आरोप लगाइरहेका छन् । यही दुई भिडियोका कारण उनी पाकिस्तानमा मात्र नभएर सामाजिक सञ्जालमा ट्रेन्डिङमा छिन् ।